Soomaali / Fasalada Waxbarashada Dadka waa weyn ee Asaasiga ah
Ku soodhawaada waxbarashada dadka waa weyn ee asaasiga ah
Waxbarashada asaasiga dadka waa weyn ee Central Minnesota (ABE) waxaan dadka waaweyn ku caawinaa si ay u noqdaan kuwa si buuxda uga qeybqaata bulshadeena, shaqsiyadoodana iskugu filnaada. Central MN ABE waa iskaashi goboleed u dhexeeya 16-ka degmo ee Iskuulada, oo ay ku jirto degmada 742. Bartayaasha dadka waaweyn ee bulshadaan ayaa waxaan si hufan loogu adeegaa goobaha waxbarasho waqtiyada maalinta lagujiro iyo saacadaha fasallada fiidki sannadka oo dhan. Central Minnesota ABE waxay soo dhaweeyneeysaa dhammaan dadka waaweyn oo dhan, 17 ama wixi kaweyn, oo aan hadda ka diiwaangashaneyn barnaamijka waxbarashada ee joogtada ah.
Haddii adiga ama qof aad garanayso uu doonayo inuu sare uqaado ama horumariyo akhriska , qoraalka ama xirfadaha xisaabta aasaasiga ah , kasbo ama ku dadaal shahaadada layiraahdo General Education Diploma (GED) , horumari ama hagaaji xirfadaha luqadda Ingiriisiga (ESL) ama baro in badan oo ku saabsan barbaarinta, waan caawin karnaa. Waxaan bixinaa jadwal dabacsan ee fasalada ah oo loogu talagalay kuna haboon nolosha dadka waaweyn ee mashquulka ah . Adeegyada taageerada sidoo kale ayaa diyaar u ah in ay ka caawiyaan bartayaasha ama dadka aqoontooda kordhinaya in ay ka qayb qaatan fasallada iyo barnaamijyada.
Qaar ka mid ah waxaa kujira:
Fasallada asaasiga xirfadaha Kombiyuutarka
Xirfad gaar ah
Shaqaalahayaga khibrada leh oo wax garad ah xirfadlayaasha ah waxaa ka mid ah macalimiinta rusqada ama shatiga macalimiinta leh , shaqaalaha bulshada , kalkaaliyayaasha , shaqaalaha taageerada, barayaal iskaa wax u qabso ah iyo kuwa kale. Waxay mudnaanteenu tahay in aan idin taageerno si aad u gaartaan hadafkiina. Haddii aad tahay ugu yaraan 16 sano jir oo hada aadan u diiwaangashaneyn barnaamijka waxbarashada Iskuulada ee joogtada ah , fadlan naga soo wac lambarka ah: 320-370-8220, ama e- mail abe@isd742.org .
Fasallada waxbarashada dadka waaweyn ee asaasiga ah
Fasalada Ingiriisiga Luqadda Labaad ahaan (ESL)
Fasalada Ingiriisiga Luqad Labaad ahaan (ESL) waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee afkooda hooyo ahayn Ingiriisiga. Fasallada waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka waaweyn laguna horumariyo ku hadalka luqadda ingirisiga, dhegaysiga, akhriska, iyo xirfadaha qoraalka sida hadafka u gaarka ah Shaqsiga. Dadka waaweyn ee ka qayb qaata fasallada ESL ayaa dareema kalsoonida kunoolaashaha iyo ka shaqeeynta Maraykanka iyo waliba barashada Ingiriisiga oo u noqon karta furaha shaqaraadinta iyo mushaarka nolol maalmeedkooda. ABE waxay bixisaa 6 heer oo kala duwan ee ardayda ESL si ay u bartaan ayna u dhisaan xirfadahooda luqadda Ingiriisiga . Laga soo bilaabo biloowga iyo kuwa ugu sare.
Dhammaan dadka cusub ee soo galootiga ku ah Maraykanka, iyadoo aan loo eeginin heerka awoodda Ingiriisi, waxaa lagu soo dhaweynayaa in ay isdiiwaangaliyaan. Ku biir ama kamid noqo 800-1000 dadka waaweyn ee ka qayb qaata fasallada ESL sannad kasta . Booqo xafiiska ama nagala soo xidhiidh lambarka ah: 320-370-8220, ama abe@isd742.org wixii macluumaad dheeraad ah.
Noqoshada muwaadin Mareykan ah waxaad a wood u yeelaneysaa inaad codeyso si buuxdana uga qayb qaadato dimuqraadiyadda maraykanka. Haddii aad noqoto muwaadin ka hor inta carruurtaada aysan gaarin 18 sano, waxay sidoo kale noqonayaan muwaadiniin. Waxabarashada dadka waa weyn ee asaasiga ah waxay bixisaa adeegyo bilaasha ah dhamaan dadka danaynaya ineey noqdaan mawaadiniin maraykan ah.
Tababar kusaabsan mawaadinimada
Fasallada ingiriiska ah ee loogutalgalay mwaadinka
Fasallada ama barayaal bilaash ah oo kaa caawinaya barashada taariikhda maraykanak iyo dawladda.
Ugudbin laguu gudbinayo adeegyada sharciga aga gaarka Stcloud si gaar ahaan kaaga caawin kara arrimaha sharciga ee ku saabsan jinsiyadda ama wadaninimada
Casharada ama fasallada lagubarto wadaninimada waxay kulmaan maalmaha Sabtida lagabilaabo 10:30 a.m. ilaa 12:30 p.m. Iskuulka Discovery Community School, ee ku yaala Waite Park.
Maktabadda St. Cloud Great River waxay bixisaa adeeg lacag la'aan ah oo layiraahdo baranaamijka xirfadaha asaasiga ee kambiyuutarka Northstar. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo xirfadaha ay u baahan yihiin dadka waa weyn goobaha shaqada maanta. Dabcan qeybahaan ayaa waxay ka koobanyihiin Lix qeybood:
Xirfadaha Kambiyuutarka asaasiga ah
Barnaamijka Kambiyuutarka loo isticmaalo Qorista (Word)
Qeybahaan ayaa waxay ku saleysan yihiin bartilmaameedyada aqoonta kambiyuutarka asaasiga ah. Dadka waa weyn waxaa a woodooda xirfdeed lagu cadayn karaa mid ama ka badan qeybahaan gooniga ah iyada oo loo marayo baaritaan uu maareeynayo kormeerka Baraha dadka waa weyn ee asaasiga. Helitaanka shahaado ayaa muujinaya shaqa bixiyayaasha in codsaduhu ogyahay ama garanayo xirfadaha aasaasiga ah ee kambiyuutarka, sidoo kale kor loogu qaado kalsoonida oo ka mid ah shaqo – raadiska. Si aad u ogaatid macluumaad dheeraad ah booqo bogga interneedka www.griver.org/events ama kala xiriir xubin ka mid ah shaqaalaha maktabadda lambarka ah: 320-370-8220.
Aqoonta Digitalka Fasalada waxaa loogu talagalay si ay u caawiyaan dadka waaweyn una hagaajiyaan xirfadahooda isticmaalka kambiyuutarada, telefoonada casriga ah, internet-ka , iyo qalabka kale . Fasalada sidoo kale waxay ka caawinayaan ardayda isticmaalka tignoolijiyada sida raadinta, qiimaynta, isticmaalka macluumaadka loo baahan yahay xaalado kala duwan.
Sidoo kale akhriska, qoraalka, iyo xirfadaha xisaabta, iyo waliba farbarashada oo xubin muhim ah una baahanyihiin dhammaan akhristayaasaha waa weyn. Waxbarashadeena waxaa loogu tala galay in lagugu siiyo xirfadaha aad u baahan tahay si aad ugu badbaadaan una guuleysataan qarniga 21aad, oo ay ku jiraan xirfadaha shaqa raadinta, isticmaalka qalabka waxbarasho tignoolajiga, iyo helidda macluumaadka muhiimka ah. Inta badan ardayda barata tilmaamahan waxay ku salaysan yihiin heerarka aqoonta Digital Northstar. Heerarkan ayaa waxay yihiin ku wa rasmi ah oo ay taageerayso waaxda waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fursadahaan, fadlan soo wac xafiiskeena oo aad ka heli kartid lambark ah: 320-370-8220, ama email noogu soo dir abe@isd742.org.
Aqoonta Qoyska waxay u ogolaanaysaa waalidiinta iyo carruurta fursad ay ku wada tagaan Iskuulka. Dadka waaweyn ee ka shaqeeya ama kobciya xirfadaha akhriska-qoraalka kana qayb qaata barnaamijyada sida Waxbarashada Waalidka iyo waqtiga caruurta iyo waalidiinta ayaa helaya isla markaas khibrada gundhiga u ah dhalaanka yar yar.
Waxbarashada dadka waaweyn : Dadka waaweyn waxay ka shaqeynayaan helitaanka shahaadada dugsiga sare, GED ama ESL.
Waqtiga Waalidka iyo Caruurta: Waalidku waxay baranayaan waxyaala ku saabsan ilmahooda ilaa hawlaha ilmanomada.
Waxbarashada Waalidka: Waalidku waxay la kulmayaan baraha waalidka si ay ugala hadlaan mawduucyo waalidnimada.
Barnaamijka dhalaanka yar yar: Carruurtu waxay leeyihiin khibrad fiican marka ugu horeysa Iskuulka.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka akhriska- qoraalka qoyska nagalsoo xidhiih lambarka ah: 320-370-8220, ama noogusoo dir ciwaankeena ah: abe@isd742.org.
Mustaqbalkaada ayaa kuu yeedhayaa! GED waxaad ku aadi kartaa waxbarashada ka dambeysa dugsiga -sare, kuna kasban kartaa aqoonsiga, helitaanka shaqo ( ama helitanka shaqo fiican ) iyo mushaar fiican oo manaafacaadleh mustaqbalka shaqadaada oo dhan. ABE ayaa idiin haysa fasallada kaa caawinaya in aad u diyaar garoowdo dhammaan afarta qaybood ee imtixaanka, imtixaanka xirfadaha qaadashada iyo kobcinta akhriska, xirfadaha aasaasiga ah ee qoraalka iyo xisaabta, isla markaana aad dhisayso kalsoonida aad u baahan tahay inaad guulaysato. Fasallada waxaa la bixiyaa waqtiyada kala duwan todobaadkii oo dhan, sidaa darteed waxaad helidoontaa fursadaha ugu wanaagsan ee ku haboon noloshaada mashquulka ah.
Wac maanta si aad u bilowdo! Lambarka ah: 320-370-8220, ama Ciwaankeena ah: abe@isd742.org.
Barnaamijka xoojinta xirfadaha waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee u baahan in ay iska dhisaan ama sare u qaadaan akhriska, qoraalka, xisaabta iyo xirfadaha higgaada ee aasaasiga ah. Barista Khaaska ah waxaa loogu talagalay in lagu hormariyo tirada balaadhan ee xirfadeed ee isticmaalka kambiyuutarka. Buugaagta iyo qalabka la isticmaalayo waxaa looqoray si gaar ah oo loogu talagalay bartayaasha dadka waaweeyn.
Si aad wax badan oo ku saabsan barnaamijka xoojinta xirfadaha u baratid wac lambarka ah: 320-370-8220, ama Ciwaankeena ah: abe@isd742.org.
Aqoonta Goobta Shaqada
Goobta farabarshada shaqada kaliya kuma koobna awooda akhriska iyo qoraalka. Waa isku darka xirfadaha loo baahan yahay in ay u shaqeeyaan si waxtar leh goobta shaqada. Xirfadaha waxaa ka mid ah:
fekerka muhiimka ah
Garashada iyo Xalinta Dhibaatooyinka
Hadalka iyo qoraalka tayada leh
Xirfadaha asaasiga ah ee kambiyuutarka
Loo-shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha labadaba ayaa ka faa'iidaya xirfadaha aasaasiga ah ee siyaadada ah ee goobta shaqada.
Wixii macluumaad dheeraad ah wac lambarka ah: 320-370-8220, ama noogalasoo xidhiidh Ciwaanka ah: abe@isd742.org.